Ukuchaneka okuphezulu kwe-cnc machining aluminium iindawo zomatshini zentsimbi mveliso kunye nabenzi | Weldo
Ukuchaneka okuphezulu kwe-cnc machining yealuminium iindawo zomatshini zensimbi
I-Aluminium sisinyithi esilula, esingesosemagneti, esinombala wesilivere onokuthi wenziwe phantse nakweyiphi na imilo. Inokuqengqeleka kwiipleyiti ezingqindilili zamatanki oxhobileyo okanye i-foil encinci ye-wrappers. Inokutsalwa kwakhona kwintambo kwaye yenziwe iitoti.
I-Cnc aluminium, iinxalenye zealuminium
Izinto eziqhelekileyo zenziwa
IAluminiyam 6061，IAluminiyam 6063，IAluminiyam 6061-T6, IAluminiyam 6063-T5, IAluminiyam 7075, IAluminiyam 7075-T6, IAluminiyam 6083, IAluminiyam 2011,
IAluminiyam 2017, IAluminiyam 2024,
Aluminium 5083, njl
Zinc / nickel / chrome nesingxobo, eshushu iqaqanjiswa, ukupeyinta,
umgubo ukutyabeka, Anodize oksijini, okanye imibala: ezifana nesilivere, luhlaza, bomvu, njl, nesingxobo, isilivere ngumfanekiswana, Gold ngumfanekiswana, njl wokucoca, wokucoca electrolytic, yazika ngaphandle nickel ombane njalo njalo.
Cnc Machining, cnc ukujika, gringding, ukubhola, W / C ...
Ubungakanani obukhulu bunokuqwalaselwa
3: Machining (iziko machining CNC, cnc lathe, yokugaya, ukujika, besila, W / C, ukubhola, uthinte ...)
5: umphezulu Ukugqiba
7: Indawo yokugcina
9: Ukuhambisa ngenqanawe
Uvavanyo lwe-100% ngaphambi kokuthunyelwa kwesampulu, ukuhlolwa kwesampulu njengeemfuno zabathengi kwimveliso yobunzima.
Ukupakisha kwethu okuqhelekileyo: iimveliso ezisongelwe ngeqamza, okanye kwi-1 piece / PP bag, emva koko kwibhokisi yeplanga okanye kwikhathuni yephepha. Kwaye uninzi lweeMpahla zithunyelwe ngaphandle yi-International Airway Express, i-DHL, ukuThumela. Ngokwesiqhelo ithatha malunga neentsuku ezi-7 ukuya kwezi-10 zokuSebenza (umnyango ukuya kwenkonzo yenkonzo) .Sinokucwangcisa ukuthunyelwa kwakhona ngeNdlela yoLwandle.
Ukuba ufumene nayiphi na indawo engafanelekanga, nceda usibonise imifanekiso, emva kokuba iinjineli zethu kunye nesebe le-QC liqwalasele, siya kukhetha ukukunceda ukulungisa okanye ukwenza kwakhona ngaphakathi kweentsuku ezili-10 ukuya kweli-15 ngokobungakanani obaliwe.
Kukho iindlela ezi-5 zokuHlawula i-odolo: i-Paypal, i-Western Union, i-T / T, iTshintshelo lweBhanki (njenge-OCBC).
I-50% yedipozithi, kunye nemali eseleyo ehlawulwa ngaphambi kokuhambisa.
Kutheni Khetha kuthi?
1:Umzi-mveliso ngokuthe ngqo, ngomgangatho olungileyo kunye nexabiso elifanelekileyo.
2: Ukulungiswa: Sinamava atyebileyo ekuqhubekeni kweentlobo ezininzi zeenxalenye zomatshini kunye neendidi ezininzi zezinto.
Wamkelekile kakhulu Non-standard, standard, OEM, iindawo machining elungelelanisiweyo.
Icandelo linokuchaneka okuphezulu, ukunyamezelana kunokufikelela +0.005mm, umphezulu woburhabaxa unokufikelela kwiRa0.8-3.2
3: Ukudibanisa: Sinesebe lokudibanisa ngobuchule, kuba umzi-mveliso wethu nawo wenza izixhobo, unokubonelela ngenkonzo yokuhlangana kuwe.
sikwabonelela ngezisombululo zokuma kubathengi bethu. Ukuba unayo nayiphi na ingxaki, ungaqhagamshelana nathi, siya kuzama konke okusemandleni ethu ukukunceda. Ukuba uneengcebiso ezixabisekileyo, siya kuthi sizithathele ingqalelo. Kwaye asizukubonisa kwabanye abantu umfanekiso wakho wokuzoba, kwaye singayincwina i-NDA.
Ukuba unomdla kwiimveliso zethu, nceda ukhululeke ukunxibelelana nathi!
Egqithileyo Icandelo le-CNC yensimbi
Okulandelayo: Metal machining iziko iindawo yokugaya cnc kungamampunge
Isimo sengqondo sabasebenzi benkonzo yabathengi sinyanisekile kwaye impendulo ifike ngexesha kwaye ineenkcukacha kakhulu, oku kuluncedo kakhulu kwisivumelwano sethu, enkosi.
Ngu-Honorio wase-Hongkong-2017.11.01 17:04
Ngu-Octavia waseDenmark-2018.11.06 10:04
Metal machining iziko Milling iindawo cnc ...
Kwenziwe ngentando Custom Aluminium CNC Machining ...
Kwenziwe ngentando Custom CNC Machining / ngomshini Aluminium Par ...
Precision High Custom Custom CNC Machining / Machin ...
Izahlulo ze-Aluminium ze-Aluminium / iinxalenye zealuminium / aluminu ...